Ireo singa 4 tokony ho azonao amin'ny atiny rehetra | Martech Zone
Ireo singa 4 tokony hanananao amin'ny atiny rehetra
Alakamisy, Aogositra 20, 2015 Alakamisy, Aogositra 20, 2015 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo mpampiofana ato aminay izay mikaroka sy manoratra fikarohana voalohany ho anay dia nanontany raha manana hevitra momba ny fanitarana an'io fikarohana io aho mba hahazoana antoka fa voadidinika sy nahasarika ny atiny. Nandritra ny volana lasa dia nanao fikarohana izahay Amy Woodall momba ny fihetsiky ny mpitsidika izay manampy amin'ity fanontaniana ity.
Amy dia mpanazatra mpivarotra efa za-draharaha sy mpandaha-teny. Izy dia miara-miasa akaiky amin'ireo ekipa mpivarotra amin'ny fanampiana azy ireo hahafantatra ireo mari-pamantarana ny fikasana sy ny antony manosika azon'ireo matihanina mivarotra hamantatra sy hampiasàny ny fanapahan-kevitry ny fividianana. Ny iray amin'ireo lesoka izay matetika ataontsika amin'ny alàlan'ny atiny dia ny maneho ny mpanoratra ny atiny fa tsy miresaka amin'ny mpividy.
Antony 4 no mandrisika ny mpihaino anao
fahombiazana - Ahoana no hanamorana ny asako sy ny fiainako izany?
fihetseham-po - Ahoana no hahasambatra ny asako na ny fiainako?
Trust - Iza no manolo-kevitra an'izany, mampiasa an'ity, ary nahoana izy ireo no manan-danja na manan-kery?
Facts - Inona ny fikarohana na valiny avy amin'ny loharanom-baovao malaza manamarina azy?
Tsy voatanisa amin'ny alàlan'ny lanjany izany, na ny mpamaky anao dia tsy tafiditra amin'ny singa iray na iray hafa. Ny singa rehetra dia manakiana ho an'ny atiny voalanjalanja. Azonao atao ny manoratra amin'ny fifantohana afovoany amin'ny iray na roa, fa izy rehetra dia manan-danja. Na inona na inona indostria misy anao na ny anaram-piasana misy anao, dia tsy mitovy amin'ny toetrany ny mpitsidika.
Araka ny eMarketer, ny tetika marketing marketing atiny B2B mahomby indrindra dia ny hetsika manokana (notononina tamin'ny 69% an'ny mpivarotra), webinar / webcasts (64%), horonan-tsary (60%), ary bilaogy (60%). Rehefa mihady lalindalina kokoa amin'ireo antontan'isa ireo ianao, ny zavatra tokony ho hitanao dia ireo paikady mahomby indrindra dia ireo izay azo ampiasaina tanteraka ireo singa 4 rehetra.
Amin'ny fivoriana ataon'ny olona manokana, ohatra, azonao atao ny mamantatra ireo olana izay ifantohan'ny mpihaino na ny fanantenany azy ireo. Mety hone izy ireo amin'ireo marika hafa arosonao. Ho an'ny maso ivohoanay, ohatra, dia mahita ny vinavina sasany fa niara-niasa tamin'ny marika lehibe toa an'i GoDaddy na Angie's List izahay ary manampy anay hiroboka lalindalina kokoa amin'ny fifamatorana. Ho an'ny vinavina hafa dia maniry ny fandinihana tranga sy zava-misy hanohana ny fanapaha-kevitr'izy ireo hividy izy ireo. Raha mijoro eo isika dia afaka mamokatra ny atiny mety eo imason'izy ireo.
Tsy mahagaga raha tsena mitombo io. Orinasa toa ny mpanjifanay FatStax manomeza fampiharana finday tarihin'ny data izay mandeha amin'ny smartphone na tablette izay mametraka ny atiny rehetra amin'ny marketing, ny varotra, na ny angona sarotra tianao hizara amin'ny tananao (ivelan'ny) mba hanomezana ny vinavinanao amin'ny fotoana ilainy izany. Tsy lazaina intsony ny hetsika dia azo soratana amin'ny alàlan'ny fampidirana antoko fahatelo.
Ao anaty atiny tsy mihetsika, toy ny famelabelarana, lahatsoratra, infografika, taratasy fotsy na koa fandinihana tranga iray dia tsy manam-bola ianao amin'ny fampitana sy ny famaritana ireo antony manosika manampy amin'ny famadihana ireo mpamaky anao. Ary ny mpamaky dia tsy entanin'ny singa tokana - mitaky fandanjalanjana amin'ny fampahalalana amin'ireo singa 4 izy ireo hanentanana azy ireo hirotsaka.
Tags: atiny mahasarikaContent Marketingfiovam-pofahombiazanasingafihetseham-pozava-misyfatstaxfahatokianaWritinglahatsoratra manoratra
Douglas Karr Thursday, August 20, 2015 Thursday, August 20, 2015
RelateIQ: CRM mifehy ny fifandraisana
Torohevitra sy karazana famokarana horonantsary mpanazava